NextMping | Ramangwana Rebasa
Sei NextMping™ inogadzira ramangwana rebasa
NextMping ™ inotarisa pane ramangwana rebasa pamwe nekukurumidza matanho anotevera. Vatengi vedu vanoremekedzwa vanozvishandisa kuronga vhiki rinotevera, rinotevera gore, kana makore anotevera.
Yedu NextMping ™ maitiro anopa mamiriro ekubatsira vatengi kuita kunoshamisa kusvetuka kwekufambira mberi pamwe nekuchinja kwakasimba munzvimbo yebasa kunodiwa kuti kuve kwakagadzirira mune ramangwana izvozvi.
NextMapping ™ ndeye yakasarudzika uye inokodzera ramangwana rechisarudzo yebasa muenzaniso inogadzira kujekeswa pamwe neanodzika matanho ekukurumidza uye kwenguva refu exponential kukanganisa kune vatengi / vashandi uye pakupedzisira nyika.
Ndeipi InoteveraMapa™ nzira?
Bhizinesi rega rega rine matambudziko akasiyana nemikana.
Kuita mataera uye kugadzira NextMping™ zvako, isu tinotanga kubatana newe nechikwata chako - uye kuitisa yedu yekutanga ongororo - kumisikidza kunzwisisa kweako 'mamiriro azvino'.
Dambudziko rakajairika revatungamiriri uye zvikwata nderekuti ivo vanoona bhizinesi ravo kuburikidza necheni imwe chete kana maonero. Kuti tiwedzere maonero akazara, tinofunga uye tinokuzivisa zvakare iwe nechikwata chako kusangano rako - kubva kune 'akawanda maonero' lens yenguva yemberi yebasa.
Nenzwisiso yakabatana yesangano, isu ikozvino tinobvunza, "Inoita sei pamangwana mamiriro ezvinhu?" Kuvaka kubva kune zviri kubuda uye zviitiko zvemberi zvinotsigirwa nedata rekutsvagira tinopa mamiriro ekuti ungave sei ramangwana rakagadzirira ikozvino.
Takashongedzwa neyemukati merudzi rwebasa, isu izvozvi tinotora mhinduro yako. Kuburikidza neravhoti dzepamoyo, kubvunzurudza uye hurukuro tinosimudzira dhata yakaunganidzwa kubva kwauri nechikwata chako uye inoparura mhinduro yakasanganiswa.
Mushure mekutora izvo kudzidza nekutsvagisa mazano, tinobvisa zvazvinoreva pasangano renyu. Isu tinobatanidza matata, tichinyatsojekesa chiratidzo uye mepu yako yezve iro ramangwana rebasa rinogona kutaridzika senge kune rako bhizinesi.
Isu takagadzira ramangwana rako remepu yebasa - ino ndiyo nguva yekushandisa. Chikamu chekupedzisira muNextMapping™ ndeyekutsanangura matanho anokwanisa kudikanwa mukati mebato rako kuunza chiratidzo ichi.